Dooddii 2-aad ee Jamhuuriga oo Xalay Dhacdey
Musharixinta madaxtinnimo ee Jamhuuriga ganacsade Donald Trump, bidix, iyo Scott Walker, midig, ayaa labadoodaba hadlaya xilli Jeb Bush, uu dhageysanayo dooddii CNN ay soo agaasintey ee ka dhacdey Ronald Reagan Presidential Library and Museum Sept. 16, 2015, ee Simi Valley, Calif. (AP Photo/Mark J. Terrill)
Dooddii labaad ee xubnaha xisbiga Jamhuuriga ee loolanka ugu jira madaxtinnimada dalka Mareykanka, ayaa xalay la qabtay, iyadoo inta bandanna ay musharrixiintaasi ka doodeen arrimo ku qotoma siyaasadda dibadda.
Xubnahan, ayaa ku doodayay inay la imaan doonaan siyaasad dhaanta waxay ugu yeereen midda liidata ee hadda madaxweyne Barack Obama uu ku maamulo Mareykanka.
Musharxiin gaaraya 11 ayaa waxay sheegeen sida ay ula tacaamuli doonaan heshiiska Iiraan ee Nuclear-ka, kobaca Shiinaha, Ruushka iyo arrimaha kooxda ISIS.
Senetorka gobolka Texas Ted Cruz, ayaa sheegay hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinnimo uu meesha ka saari doono heshiiska Iran ee Nuclearka- isla maalinta koowaad ee uu xafiiska tago.
Guddoomiyihii hore ee Florida Jeb Bush iyo Senetarka Kentucky Rand Paul, ayaa sheegay in tallaabadaasi ay noqoneyso mid lagu deg dego, waxana ay sheegeen in madaxweynaha la dooran doono ay tahay inuusan si dhaqsa leh uga laaban heshiis uu Mareykanku la gaaray xulafadiisa caalamiga ah
Trump, oo aan qibrad badan u laheyn siyaasadda arrimaha dibbada, ayaa inta badan ka maqnaa doodda ku saabsan arrimaha caalamka.
Carly Fiorina, oo ah madaxii hore ee Hewlett Packard, oo doonaysa inay iyaduna siyaasaddeeda arrimaha dibbadda muuqaal wanaagsan u yeesho, ayaa sheegtay inaysan la hadli doonin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.